YEYINTNGE(CANADA): Monday, February 21
အေးဗျာ ၊ ကြား တာ လေး ပြော ပါ ဦးမယ် ၊ ဟို တနေ့ က ဘီဘီစီ မှာ ပင်လုံ ညီလာခံ
ကိတ်စ ဆွေးနွေးတာ နားထောင် တာ မှာ ၊ အန်အယ်ဒီ က ဘဘ ဦးဝင်းတင် ပြော တာ ကြား
ရပါတယ် ၊ သူ ပြော တာ ကောင်း ပါ တယ် ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံး သာ တူ ညီ မျှ
ဖြစ်ကြဘို့ အကြောင်း ပါ။ သူ က ပြော သွား တာ က ၊ ဗမာ ဆို တာ လဲ အခြား
တိုင်းရင်းသား များ နည်းတူ ၊ လူ မျိုး တမျိုး ပါ ဘဲ တဲ့ ခင် ဗျ ။
ဒါ ကြောင့် ဗမာ ပေ မဲ့ လဲ ၊ ပြည် မ လို့ မခေါ် သင့် ဘဲ ၊ တခြား တိုင်းရင်းသား လူ မျိုး
တွေ လို ၊ ဗမာပြည်နယ် အဆင့် မျိုး ၊ ပြည်နယ် ၂ ခု ထက် မပို ဘဲ ရ သင့် တယ် လို့
ဆို ပါ တယ် ၊ ဒါ ပေ မဲ့ ၊ အဲ ဒီ ဗမာ ပြည်နယ် ၂ ခု ကို ၊ ဘယ် နား
သွား ထား မလဲ ၊ ဘယ်လောက် ကျယ် သလဲ တော့ ပြော မသွား ပါ ဘူး။
အင်း ခေါင်းဆောင် လုပ်မဲ့ ၊ သူ များ သေချာ စဉ်းစား ဘို့ လို ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ က လဲ ခက် နေတယ် ဗျာ ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တို့ တရုပ်တို့
ဂျာမဏီ တို့ မှာ ပြည် နယ် တွေ ၊ လူ တွေ အများကြီး ရှိ ကြ ပေ မဲ့ ၊ ဒီ ပြည် နယ် တွေ ကို
တည်ရှိရာ ပထဝီ ဒေသ ၊ နာမည် တွေ နဲ့ ဘဲ နာမည် ပေး ထား ပြီး ၊ ဘယ် နိုင် ငံ မှာ က မှ
လူ မျိုး နာမည် တွေ နဲ့ ဒေသ တွေ ကို အမည် ပေးထား ကြ တာ မရှိပါ ဗျာ။
အရီဇိုနား တို့ ဖလောရီဒါ တို့ မီချီဂန် တို အိုဟိုင်းယိုး ပြည်နယ် တွေ တို့ က
ဒေသ တွေ ကို နာမည် တပ်ထားတာပါ ၊ သြစတြေလျ နိုင်ငံ ၊ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ ၊ထိုင်း နိုင်ငံ
တွေ မှာ လဲ ပြည်နယ် နာမည်တွေ က ဒေသ နာမည်တွေ ပါ ၊ လူမျိုး နာမည် တပ်မထားပါဘူး
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာပြည် က တော့ ဗျာ ၊ သမိုင်း အဆင့် ဆင့် ကို ဖြတ် လာ ခဲ့ တဲ့
ဒီ ပြည်နယ် နာမည် တွေ နဲ့ ဘဲ ၊ နယ် နမိတ် ပိုင် ဆိုင်ခွင့် ၊ လူ မျိုး ရဲ့ အဆင့် အတန်း
တန်းတူညီတူ မရဘူး ၊ ရတယ် ဆိုတာတွေ နဲ့ ဘဲ ၊ ပြသနာ မဆုံး နိုင် ဖြစ် နေ ရ တာပါ။
တကယ် တော့ ကရင် ပြည်နယ် ဆိုတာ နယ်နမိတ် သတ်မှတ်ချက် သာ ဖြစ် ပြီး ၊
ဒီ ပြည်နယ် ထဲ က ရှိသမျှ လူ တွေ အားလုံး က ကရင်လူမျိုး တွေ မဟုတ် ရ ပါ ဗျာ ၊
တခြား ပြည်နယ် တွေ လဲ အလားတူပါဘဲ ခင် ဗျာ
ဒီ လို ပါ ဘဲ ၊ ကရင် လူ မျိူး ညီ နောင် များ က လဲ ၊ တ တိုင်း တပြည် လုံး ၊ ရှိ သမျှ
တိုင်း နဲ့ ပြည်နယ် အား လုံး မှာ ဖြန့် ကျက် နေ ထိုင် ကြ ပါ တယ်။ ဒီ တော့ ကာ
နောင် ပင်လုံ ညီလာခံ များ လုပ် မယ် ဆိုရင် ၊ ဘယ်ပြည်နယ် ၊ ဘယ် ပြည်မ မဆို
တန်းတူ ညီ မျှ ရှိရေး ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ရှိ သူ အား လုံး ၊ နိုင် ငံသား အခွင့် အရေး
တန်း တူ ညီ မျှ ရ နိုင် ရေး ကို ရှေး ရှု ကြ တာ ပို ကောင်း မယ် ထင် ပါ တယ်။
လူ မျိုး ရေး ကို ရှေ့ တန်း တင် ရင် ၊ အခု ပြည်နယ် စာ ရင်း ပေါက် နေ တဲ့ လူ မျိုး ၇ မျိုး
အတွက်သာ ဖြစ် နိုင် ပြီး ကျန် လူ မျိုး ၁ဝဝ လောက် က ဘာ လုပ် ရ မှာ လဲ ဗျာ။
အခု ဘဘ ဦးဝင်းတင် ပြော လိုက် တာ က ၊ ခု ဖြစ် နေ တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြသနာ က
ဗမာ လူ မျိုး နဲ့ ကျန် တဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေ အား လုံး ၊ ရှင်း မ ရ တဲ့ ပြသနာ ဖြစ်
နေပုံ မျိုး ၊ အဓိတ်ပါယ် သက်ရောက် သွားစေ ပါ တယ် ။
လူ မျိုးရေး နဲ့ ရှေ့တန်းတင် ညှိနှိုင်း ကြ ရင် တော့ ၊ မ လွယ် ဘူး ထင် ပါ တယ် ၊ ရှေ့
ကို တိုးလေ ၊ ခက် ခဲ လေ ဖြစ် ပါ လိမ့်မယ် ၊ လူ မျိုး ၂ ခု ထဲ ရှိ ရင် တောင် ၊ တယေက် နဲ့
တယောက် အတိ အကျ အညီ အမျှ ဆို တာ ၊ တိုင်း တာ လေ ၊ မ ညီ မျှ လေ ပါ ဘဲ ၊
အခု လို လူ မျိုး အများ ကြီး ဆို ရင် အသေးစိတ် ညှိ လေ၊
မညီ တာ တွေ တွေ့လာ လေ ဘဲ ဖြစ် ကြ ရ မှာ ပါ။
လူ မျိုး ဆို တာ လဲ အတော် ခက် ပါ တယ် ၊ ဥပမာ ၊ ကျွန်တော် ဘဲ ဆို ပါ တော့
ငယ်ငယ် က ခရစ်ယာန် ပါ။ အခု ကြီးလာတော့ ဗုဒ်ဓ ဘာသာ ကို ယုံကြည် ပါတယ်။
မွေးတော့ အညာ မှာ ၊ အဖေ က ကရင် ၊ သေချာအောင် ပြော ရရင် ကုလား စပ် ပါ တယ်။
အမေ ရဲ့ အမျိုးတွေ အများစု ပြော တာ က မွန် ပါ။ သေချာအောင် ပြော ရရင် တရုပ်သွေး
လည်း ပါ ပါ တယ် ။ ဒီ တော့ ကျွန်တော် က၊ ဘာ လူမျိုး ပါ လဲ ခင် ဗျာ
ဇာတိမန် တက်ကြွ ချင် လွန်းလို့ ၊ စာ ဖတ် သူ တွေ ဖြေ ပေး ကြ ပါ။
အခုနား သွားတယ် ဆိုတဲ့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ် အလောင်း အလျာ ၊ ဗိုလ်ချုပ် သူရမြင့်အောင်
ဆိုရင် သူ့ အဖေ က ၊ ကရင် ၊ အမေ က ပအိုး ၊ သူ့ မိန်းမ ရဲ့ မိဘ တွေ က မွန် နဲ့ ကုလား
စပ် ပါတယ်။ လက်ရှိ ၊ သူ တို့ ၊ သား သမီး တွေ က ဘာ လူ မျိုး ပါ လဲ ခင် ဗျာ ။
စာ ဖတ် သူ တွေ ဖြေ ပေး ကြ ပါ။
အေး ပေါ့ ကွာ ၊ ဒီ လို ဆို ရင် ၊ မင်း တို့ က မျိုး မစစ် ၊ ပန်းစုံသား လို့ အား မ နာ ပ ပြော
ချင် လဲ ပြော ကြ ပါ။ ဒီ လို ပြော ကြေး ဆို ရင် ၊ ကျွန်တော် တို့ တိုင်း ပြည် မှာ
သူ လို ကိုယ် လို ၊ မျိုး မ စစ် တွေ အများ ကြီး ပါ။ ကျွန် တော် မျိုး မစစ်၊ ဖြစ် ၊
မဖြစ် တော့ ၊ စာ ဖတ် သူ တို့ သဘော ပါ ။ လူ စစ် စစ် ၊ လူ စိတ် အပြည့် ရှိတာ တော့ ၊
ကိုယ့်  ကို ကိုယ် မှတ် ကျောက် အတင် ခံ နိုင် ပါ တယ် ခင် ဗျာ ။
ပြီးခဲ တဲ့ ရက် သတင်းတွေ ထဲ ၊ သီပေါမင်း ရဲ့ အိန်ဒယိ နိုင်ငံ က စံအိမ်တော် အဟောင်း
ကို ပြည်နယ် အစိုးရ က တာဝန်ယူပြီး မွမ်း မံ တော့ မယ် လို့ ကြားရ ပါတယ် ၊
အင်တာနက် ထဲ သွား ရင်း လာ ရင်း ၊ အဲ ဒီ စံအိမ်တော် ကြီး အကြောင်း ဝက်ဆိုဒ်တွေ့ လို့
ဖတ်ကြည့် တော့ ဗမာ ပြည်ရဲ့ နောက်ဆုံး ရေ မြေ့သခင် မင်းတြားကြီး ရဲ့ မြေးတော် မြစ်တော်
တီတော် တတွေ ရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထဲ ၊ ဗမာရုပ် တယောက် မှ မတွေ့ တော့ ပါ ခင် ဗျာ။
အကုန်လုံး မျက်လုံးပြူး ပြူး အသား မဲ မဲ ၊ ပန်ချာပီ ကုလားလေး တွေ ဘဲ တွေ့ ရ ပါတော့
တယ် ခင်ဗျာ။ သီပေါမင်း အနွယ်တော်တွေ ၊ သူ တို့ ၊ သား သမီး တွေ ကို
အခု အချိန် မှာ ဘာ လူ မျိုး လို့ ပြော ရ မှာ ပါ လဲ ခင် ဗျာ ။
ဒီ လို ဘဲ ၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်တပ် အာဏာသိမ်း တော့ ပြည်ပ ကို ပြောင်း ပြီး အခြေချ ကြ တဲ့
ရှမ်း စော်ဘွားကြီးတွေ ၊ ကချင် ဒူဝါးကြီးတွေ ၊ ကရင် ချင်း ခေါင်းဆောင် တွေ ၊ ဒီ ကနေ့ သူ
တို့ ရဲ့ သားစဉ် မြေးဆက် တွေ လက်လှမ်းမီ သမျှ ကြည့် လိုက် တော့ နှုတ်ခေါင်းတွေ ချွန်
ကုန်ကြပါဘီ ၊ တချို့ ဆို အမေရိကန်ပေါက် ကပ်ပလီတွေ နဲ့ အကြောင်း ပါ သူ တွေ တောင်
ရှိ ကြ ပါ တယ်။ သူ တို့ ၊ သား သမီး တွေ က ဘာ လူ မျိုး ပါ လဲ ခင် ဗျာ ။
ရ လာ မဲ့ အဖြေ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ အမေ စု က လဲ ၊
ဒီ မေးခွန်း တွေ ရဲ့ အဖြေ တွေ ကို ၊ စိတ် ဝင် စား မယ် ထင် ပါ တယ်။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် မြေပုံ က လဲ ၊ ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော် ၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံ
တော် ၊ သမိုင်းစာအုပ် တွေ ထဲ ဆွဲပြထားတာ ဟိန်းဟိန်း ထ နေ သ ပ ဗျာ ၊ နောက် တော့
လဲ အင်္ဂလိပ် လက်အောက် ကုပ်ကုပ် လေး ရောက် သွားတော့ ၊ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ် စဉ် က
သူ့ အုပ်ချုပ်ရေး အဆင်ပြေအောင် ဒေသတို့ မြို့နယ် တို့ ခရိုင် တို့ သတ် မှတ် ရေးဆွဲ
ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီ ကြားထဲ ၁၉၄၇ တုံး က ဆွဲ တဲ့ မြေပုံ နဲ့ ၁၉၇၄ သတ်မှတ် တဲ့
မြေပုံ မတူသေး ပါ ခင် ဗျာ။
ခု န ကျွန်တော် ပြောတဲ့ တရုပ်သွေး ရော တာ ၊ ကုလား သွေး ရော တာ က ၊ ဟို အရင် ကတဲ
က ပါ ဗျာ ၊ ကျွန်တော်တို့ ကိုးကွယ် တဲ့ မြတ်စွာဘုရား တောင် တကယ် တော့ လူမျိုး လို့
ပြော ရင် ကုလား ပါ ဘဲ ဗျာ ၊ အခု လူ တွေ ဘုရားဖူးသွားရင် ကုလားပြည် က ဗုဒ်ဓ ဂါယာ ကို
ဘဲ သွား ရတာပါ။ အနော်ရထာမင်း လက်ထက် ကတဲ က ပုဂံ မှာ တရုပ်တွေ အများကြီး
သထုံ မှာ ကုလားတွေ အများကြီး ရောက် နေ ပါ ပြီ။ ရာဇဝင် မှာ အများကြီး ရှိ ပါတယ်။
ဗမာ့ သမိုင်း က ပထမဦးဆုံး မင်းဆက် ကလဲ ဝိဒဒူပမင်း ရန်ကြောင့်
ကုလားပြည် က ထွက်ပြေးလာ တဲ့ သာကီဝင် အမျိုးပါ။
လူမျိုး အစ ဖော်ကြ ကြေးဆိုရင် လဲ ဗြမာကြီးတွေ က စ မလား ၊ အာဒမ် နဲ့ဧဝ က စ မလား
အောက်ချင်းငှက် ဥတာ က စ မလား ၊ နေနတ်သား နဲ့ နဂါးနတ်သမီး ဥ ဥ တာ က စ မလား
တိဘက်မြန်မာ ၊ မွန်ခမာ ၊ မွန်ဂို မြန်မာ တွေ က စ မလား ၊ ဟို ပုံတောင် ပုံညာ မှာ ရှာတွေ့
ခဲ့ တဲ့ ပရိုင်းမိတ် လူ့မေးရိုးကြီး ကိုင် ပြီး စ မလား ၊ စဉ်းစား ကြည့် ပါ ခင် ဗျာ
အခု ရှိ နေ တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြသနာ က ၊ ဘိုးစဉ် ဘောင် ဆက် လက်ဆင့် ကမ်း ပေး
ခဲ့ တဲ့ ပြသနာ တွေ ပါ။ သေ တဲ့ သူ တွေ လဲ သေ ကုန် ပါ ဘီ။ ဘဘ ဦးဝင်းတင် တို့
လဲ အသက်ရှစ်ဆယ် တန်း ဆိုတော့ ၊ နောင် လူ တွေ ကို ကောင်း သော အမွေ ပေး ခဲ့ ပါဗျာ
အခု တိုင်းရင်းသား ပြသနာ ကို ပုံ ဖော် ပုံက ၊ ဗမာ လူ မျိုး ၊ တမျိုး ထဲ ကြောင့်
ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူ မျိုး များ အားလုံး တွေ နဲ့ ဖြစ် နေ တဲ့ လူမျိုးရေး ပြသနာ လို့တော့
ပင်လုံ ညီလာခံ အသစ် ကို ၊ ပုံ မဖော်ကြ ပါ နဲ့ ဗျာ။
လူမျိုး တမျိုး စီ လိုက် ညှိ နေ လို့ က တော့ ၊ ညှိ လေ အဆင် မပြေ လေ ပါ ဘဲ။
တန်း တူ ညီ မျှ ဖြစ် ဘို့ ကြိုးစား နေ ၊ မတူ ညီ နေ တာ တွေ ပေါ် လာလေ ပါ ဘဲ။
လူ မျိုး အရေး ခေါင်းစဉ် တပ် သမျှ တော့ ၊ နောင် သား စဉ် မြေးဆက် ပြေလည် ဘို့
အကြောင်း မရှိ ပါ ခင် ဗျာ။
ပြည် နယ် နာမည် ရ ပြီး တိုင်း ရင်း သား ခေါင်း ဆောင် များ ခင် ဗျား ၊
လူ မျိုး တမျိုး ချင်း အရေး ၊ စဉ်းစား နေ တာ ထက် ၊ ပြည် နယ် အတွင်း နေ ထိုင် ကြ တဲ့
ပြည် နယ် သူ ၊ ပြည် နယ် သား ၊ နိုင် ငံ သူ နိုင် ငံသား များ အား လုံး တန်း တူ
အခွင့် အရေး ရရ ရှိရေး ၊ ကဘာ့ နိုင်ငံသား များ နည်း တူ ၊ လူ့ အခွင့် အရေး
အပြည့် အဝ ရရှိ ရေးကို ဘဲ ၊ စေတနာလေး နဲ့ ဦးစားပေး စဉ်းစား ပေးကြပါ ခင်ဗျာ။
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး ခင်ဗျား ၊ မြန်မာပြည် တပြည်လုံး ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး စစ်တိုက် နေ တယ်
ဆိုရင် မြဝတီ တို့ ကော့ ကရိတ် တို့ ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့ တွေ ဘက် မှာ ပစ်လား ခတ် လား
မြို့ဝင်သိမ်း တာ တို့ မလုပ် ပါ တော့ နဲ့ ဗျာ ၊ အဲဒီဘက် က လူတွေ စားရေးသောက်ရေး
ဗန ရေး ထိုင် ရေး အတော် ခက် ခဲနေ ပါ ပြီ ခင် ဗျာ ၊ နေ ပြည် တော် ဘက် တလှည့် ပေးပြီး
တိုက်ပွဲဝင် ပေးစေ ချင် ပါ တယ် ခင် ဗျာ။
သမိုင်း ကို ပြန်ကြည့် ကြ ပါ ခင် ဗျာ ၊ နှစ် ၆ဝ ကျော် လောက် အခြောက်တိုက် တိုင်းပြည် ကို
ပြာပုံ ဘဝ ရောက် အောင် သက်တမ်း ကြာ ခဲ့ တဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ပြသနာ ကို စဉ်းစား ကြပါဗျာ
ဗမာ လူမျိုး နဲ့ ကျန်တဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး တွေ မကြေနပ်လို့ စစ် ခင်း နေတာလား ၊
ခေတ် အဆက်ဆက်အစိုးရတွေ နဲ့ ၊လက်နက်ကိုင်လူမျိုးစု အဖွဲ့ တွေ ရန်မီး မငြိမ်းကြတာ လား
ခေတ် အဆက်ဆက် လက်နက် ကိုင်ပြီး ၊ မြန်မာပြည်တပြည်လုံး ပါတ်သိမ်းပြီး ရန်ကုန် အစိုးရ
လို့ကွက်ကွက် လေး ကျန်သည်အထိ ၊ မေ မြို့ ၊ အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန် ထဲက ကျောက်တော်ကြီး
ဘုရားနားအထိ တပြည်လုံး သိမ်းခဲ့ တဲ့ အဖွဲ့တွေ ဘဲ ၊ ခု ချိန် အထိ ကျန်နေတာလား ၊
စဉ်းစားကြည့် ကြ ပါ ခင် ဗျာ ။
ကျွန်တော့် သဘော အရ ဆိုရင် ဘာမှ အကျိုး မရှိတဲ့ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စေချင်ပါပီ။
အခု ရှိ နေ တဲ့ မြေ့ပုံလေး မပျောက်မှာ သေချာရင် ၊ နိုင်ငံသားတိုင်း ၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး
တန်းတူညီမျှ ရကြမယ် ဆိုရင် ၊ ကျန် နေ တဲ့ ဒေသ တွေ အားလုံး ၊ တပ် ချင် တဲ့
တိုင်းရင်းသား ဒေသပြည်နယ် နာမည် တပ်လိုက်ပါ ၊ ပြည်နယ် တွေ ရဲ့ နယ် နမိတ် မြေပုံ တွေ
ကို လဲ ၊ ကြိုက် သလို ဆွဲ လိုက် စမ်း ပါ။ ဘယ် ဒေသ ကို ဘယ်နာမည် ခေါ်ခေါ် ၊
ဘယ်ပြည်နယ် ဘယ်လောက် ကျယ်ကျယ် ၊ နိုင်ငံသား အား လုံး
အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော် ရွှင် ရွှင် နေ နိုင် မဲ့ နေ့ ရက် များ ကို သာ
အမြန် ဆုံး ရ ချင် နေ ပ ဗျား ၊
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/21/2011 1 အကြံပြုခြင်း
21 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.doc
2341K View Download
21 Feb 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
4247K View Download
ABMA Journal Volume2No 4.pdf
21 Feb 2011 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/21/20110အကြံပြုခြင်း
အာဏာဆက်ခံ ရန် ကန့် ကွက်မှု များကြောင့် ၊ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး အနိုင် ပိုင်းတော့မည်
မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် အား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ မှာယနေ့ပြုလုပ် နေသည့် အစည်း အဝေး ရလာဒ် အပြီးတွင် ၎င်း ၏ အကြံ မအောင် မြင်ပါက တရုတ်နိုင်ငံတွင် သွားရောက် အခြေချတော့မည် ဟုFreedom News Group မှ သတင်း ရရှိသည်။ (APPhoto/File)
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ သည် ၎င်း ၏ မြေးဖြစ်သူ နေရွှေသွေးအောင် အား
အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ရန် အတွက် သဘောတူမည် ထင်သည့် ထိပ်တန်း စစ်ခေါင်းဆောင် အချို့ 
နှင့် ဆွေးနွေး ရာတွင် ပင် ဆန့် ကျင် ကန့် ကွက် ခံနေရသဖြင့် ယနေ့ နောက်ဆုံး အဆင့် အစည်း
အဝေး ရလာဒ် ပြီး ပါက သူ၏ စစ်အာဏာရှင် ဘ၀ ကို ကန့် လန့် ကာ ချ တော့ မည် ဟု Freedom
News Group မှ သတင်းရရှိသည်။
အသက် ၇၈ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သည့် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ သည်
အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ် ရှိပြီ ဖြစ်သည့် ၎င်း ၏ မြေးဖြစ်သူ မောင်နေရွှေသွေး အောင် အား အာ
ဏာလွှဲပြောင်း ဆက် ခံ နိုင်ရန် ကြံစည် ခြင်း ဖြစ်သည်။
Freedom News Group မှ စုံစမ်း သိရှိ ရသည့် သတင်းများ အရ နေရွှေသွေးအောင်သည် သူ
အဘွား ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် နှင့် အတူ တရုတ် ပြည်သို့ ရောက် ရှိ နေသည် ဟု သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး သန်းရွှေ ၏ မိသား စု သည် ၎င်း တို့ ၏ ပိုင်ဆိုင် မှု များ ကို တရုတ် ပြည် သို့ ရွှေ့ 
ထား ပြီး ဟု ယူဆရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ ကိုယ် တိုင် လည်း ၎င်း ၏ အကြံအစည် မအောင် မြင် ပါက တရုတ်ပြည်
သို့ ရွှေ့ ပြောင်း အခြေစိုက် တော့ မည် ဟု သိရသည်။
မြောက်ကိုရီးယား၊ လစ်ဗျား နှင့် ယခင် အီဂျစ် ခေါင်းဆောင် မူဘာရက် က ၎င်း၏ သား အား
ဏာဆက် ခံရန် စီစဉ် ထားသကဲ့ သို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ လည်း စီစဉ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထင်ရှား သော မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဦး ကမူ အသက်အရွယ် ငယ်လွန်း သူ ကို ၎င်း တို့ ထက်
ပိုမို မြင့်မား သည့် နိုင်ငံတော် အာဏာအပ် နှံ ခြင်း သည် မြန်မာ စစ်တပ် ကို စော်ကား ခြင်း
ဖြစ်သည် ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့ မှ အငြိမ်းစား စစ်အရာ ရှိ တစ်ဦး ကမူ ” မြန်မာ တွေ အစအရာရာ ခောတ်နောက်ကျ
ပေမယ့် ပဒေသရာဇ် အတွေး အခေါ် လုံးဝ မရှိတော့ တာ သူ မသိတော့တာ တော်တော်အံသြ
ဖို့ ကောင်းတာပဲ ” ဟု မှတ်ချက်ပြု ပြောကြား သည်။
By ဦးသန်းလွင်ထွန်း တနင်္ဂနွေ, 20 ဖေဖော်ဝါရီ 2011
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ ဗွီအိုအေဌာနမှုးဦးသန်းလွင်ထွန်း က မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကော်မရှင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာများကို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့် ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်အေး ဦးဆောင်မယ့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးကောက်ပွဲ စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ အရေးယူမှု၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ခွင့်၊ ရပ်တည်ခွင့် စတာတွေအားလုံးကို အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အာဏာအပြည့်ရှိတဲ့ ကော်မရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်မရှင်ဟာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ တာဝန်ယူဖို့ ခန့်အပ်ခြင်းခံရတဲ့အတွက် လစ်ဟာသွားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နေရာတွေမှာ အစားထိုးဖို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကြီးကြပ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းညွန့်က ဗွီအိုအေကို ရှင်းပြပါတယ်။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ ဟိုအရင် ၉၀ ခုနှစ်တုန်းက ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်ခဲ့တဲ့ ဦးဘဌေးတို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ အဲဒီတုန်းက ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ကော်မရှင်ဥပဒေအရဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ကြီးကြပ်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်တဲ့အထိပဲ သူ့ဥပဒေက လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ဘယ်နည်းဘယ်ပုံ ကြီးကြပ်ရမယ်၊ စီမံရမယ်ဆိုတာ အဲဒီတုန်းက မပါဘူး။ အခု ဒီ ၂၀၀၈ မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ပြဌာန်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေမှာကျတော့ ကော်မရှင်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတင်တောင် မဟုတ်တော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို ကြီးကြပ်ရေး၊ လမ်းညွှန်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်စေခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ သူက ယူထားတယ်။
အဲဒီတော့ အခု ဦးတင်အေးဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ ဘာထူးခြားလည်းဆိုရင် ဦးတင်အေးရဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ သူဟာ အရေးကြီးတဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်တာဝန်၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ နောက်တခါ ဦးပိုင်လိမိတက် ဥက္ကဋ္ဌစတဲ့ ကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေ ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အခု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တာဝန်ယူတယ်ဆိုရင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ နဂိုရ်လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ တာဝန်များက ဦးတင်အေး ဦးဆောင်လိုက်တဲ့အတွက် ပိုပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက်၊ ထက်ထက်မြက်မြက် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခေါင်းဆောင်မှုတွေ ရှိလာတာပေါ့။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း။ ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်သတိပြုမိတဲ့ ကိစ္စလေးရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ရပ်ပေါ့နော်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အခုလက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် (Abihisit) ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ ပြန်လည်စီစစ်ပြီးတော့ အဘီဆစ် ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမှာ အလှူငွေရယူသုံးစွဲမှုကိစ္စတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း တခြားမသမာမှုကိစ္စတွေ - အဲဒါတွေကို တိုင်ကြားမှုတွေရှိတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ပါတီအဖြစ်ကနေ ရပ်စဲစေဖို့အထိ ညွှန်ကြားမှုတွေ၊ တောင်းဆိုမှုတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရတယ်လေ။
သဘောကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေဟာ အတော်လေးကို ကြီးမားနေတာတွေ့ရတယ်။
အဲဒီတော့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး ဦးဆောင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကော အလားတူ ဗမာပြည်တွင်းမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွဲရင်ပေါ့ တခြားအတိုက်အခံပါတီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ အတိုက်အခံပါတီတွေကို ဦးဆောင်တဲ့၊ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်ကို ဒီလို စီစစ်မှုတွေ၊ တိုင်တန်းမှုတွေ ရှိလာခဲ့လို့ရှိရင် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေသလားခင်ဗျ။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ ကျနော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာက ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မတူတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းချက်ပေါ့။ ထိုင်းမှာကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကို ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကို တင်ပြလို့ရတယ်။ တင်ပြလည်းတင်ပြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံခုံရုံးက အဆုံးအဖြတ်ပေးတာ။ အခုနက အဘီဆစ်လို ကိစ္စတွေကိုပေါ့။
ဒီမှာကတော့ ဥပဒေအရ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခုံအဖွဲ့ရဲ့ အမိန့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့အယူခံမှုတွေ၊ ပြင်ဆင်မှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ အပြီးအပြတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီမှာ ထိုင်းနဲ့ မတူတာက ပြတ်ပြတ်သားသား သူက ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်တဲ့ကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ကိစ္စအားလုံးဟာ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ အပြီးအပြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးပြီ။ အဲဒါက ထိုင်းနဲ့ ဗမာနဲ့ မတူတဲ့ အခြေအနေပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ လောလောဆယ်အားဖြင့် ရွေးကောက်ခံထားရပြီးသား ကိုယ်စားလှယ်တွေတောင်မှပဲ မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဥပမာအားဖြင့် မဲဆန္ဒပြုသူရဲ့ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုပါကြောင်း ကန့်ကွက်တဲ့ တိုင်ကြားမှုတွေရှိလာလို့ရှိရင် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်၊ အရေးယူရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်မှာတော့ ဒါဟာ တချိန်ချိန်မှာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ အတိုက်အခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ဖိနှိပ်လာမယ့် အလားအလာ မရှိဘူးလား။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ အဲဒါကတော့ အတိုက်အခံပါတီပဲပြောပြော၊ အနိုင်ရပါတီပဲပြောပြော လူထုက တစ်ရာခိုင်နှုန်းပေးတဲ့ လူထုက တိုင်ကြားလာလို့ ဒီတိုင်ကြားချက်က ဟုတ်မှန်တယ်ဆိုရင် ကော်မရှင်က အရေးယူပါလိမ့်မယ်။ အတိုက်အခံတွေမှာရော၊ အနိုင်ရပါတီမှာရော ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ပေးခဲ့တဲ့ကတိတွေနဲ့ အရွေးခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နေမှုထိုင်မှုတွေ ပြောင်းလဲပြီးတော့ ဗမာလူထုက အရင်နဲ့မတူတာက ဘယ်သူတွေ နိုင်ငံရေး လုပ်စားတယ်၊ ဘယ်သူတွေက နိုင်ငံရေးကို ရိုးရိုးသားသား လုပ်တယ်ဆိုတာကို အကဲဖြတ်နိုင်တဲ့ကာလ ဆိုက်ရောက်လာပြီ။ အဲဒီတော့ သူတို့က သူတို့ တိုင်ခွင့်အရ အချက်အလက်အမှန်တွေနဲ့ တိုင်ကြားလာရင်တော့ ကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ အဲဒီရဲ့  ထွက်ပေါ်ချက်ပေါ်မှာတော့ အရေးယူမှာပေါ့။ အဲဒီလို အရေးယူတဲ့အခါမှာ အားလုံး ဥပဒေရှေ့ မှောက်မှာ ညီတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရေး၊ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ အရေးယူမှုတွေ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်ကတော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာမလား၊ မဖြစ်လာဘူးဆိုတာ နောက်ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အခြေအနေအပေါ်မှာ ကျနော်လည်း စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ အကဲဖြတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ နောက်တချက်က မေးချင်တဲ့ကိစ္စက ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ အခု အသစ်ဖွဲ့စည်းမယ့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး ဦးဆောင်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့က အခု လွှတ်တော်ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အမည်စာရင်း တင်သွင်းပြီးတော့ ခန့်အပ်လိုက်သလို လစ်ဟသွားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ နေရာတွေကို ပြန်လည်ပြီး ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ ကိစ္စတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဥပဒေပြဌာန်းမှုတွေ ဘာတွေရှိသလဲ။ ဒီလို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်တော့လောက် ပါလာမလဲလို့ ထင်သလဲ။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ အဲဒါကတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က သူသင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေမှာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ကျင်းပမယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ကျင်းပမယ်ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့  ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာပဲ မူတည်တာပေါ့။ ဥပဒေမှာတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်အချိန် ကျင်းပရမယ်လို့ မရေးထားဘူး။ သို့သော် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရမယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာ ပါပြီသာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာတော့ ပြည်သူတွေက ရွေးကောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲက နုတ်ထွက်သွားလို့ဖြစ်စေ၊ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် လုပ်ငန်းတာဝန်မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရက်တခုမှာ အစားထိုး ခန့်အပ်တာပဲဖြစ်စေ၊ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တာပဲဖြစ်စေ၊ တိတိကျကျ သတ်မှတ်၊ ရက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ လုပ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ဦးသိန်းညွှန့်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ရက်သတ်မှတ်ထားတာ မရှိဘူးဆိုတာလား။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ အခု ဒီရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာတော့ လွတ်လပ်သွားတဲ့နေရာကို ရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာမှ ကြာရင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတိအကျ ရေးသားထားတာကိုတော့ ကျနော် လေ့လာတဲ့အခါမှာ မတွေ့ရဘူး။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ အသေအခြာပါပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ ကျနော် ကြားနေရတဲ့ သတင်းတချို့ တွေ - အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်ခေါ်ယူကျင်းပပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ခန့်အပ်ခံရတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲကနေ နုတ်ထွက်ဖို့ လိုတဲ့လူတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒီတော့ နုတ်ထွက်တဲ့အခါကြရင် လစ်ဟသွားတဲ့နေရာတွေကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်လာမယ့် အခြေအနေတွေရှိမယ်။ အဲဒီ နေရာတွေအတွက် အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ အပြင်းအထန် ပြန်လည်ပြိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုစားမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတချို့ လည်း ကြားရတယ်။ ဒီလိုသာ ရက်သတ်မှတ်မှု၊ ကန့်သတ်မှု မရှိဘဲနဲ့ဆိုရင် ဒီဘက်က ပြင်ဆင်မှုတွေက အလဟသဖြစ်သွားမယ်လို့ ပြောနိုင်သလား။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ထင်မြင်ချက် မပေးချင်ဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစုလို့ခေါ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပါတီတွေရဲ့  ခေါင်းဆောင်မှု၊ စည်းရုံးမှု၊ လူထုအားလုံးကို ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် တုံ့ပြန်မှု၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလမှာ တုံ့ပြန်မှု၊ ပြီးတော့ သူတို့တဦးချင်းရဲ့  ပြောတာဆိုတာတွေကြောင့် ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာ မီဒီယာတွေက ထောက်ပြနေမှု။ အဲဒီအချက်တွေအပေါ်မှာ ခြုံငုံပြီးတော့ သူတို့ပေါ်ပေါက်လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အောင်နိုင်သူများ ဖြစ်မလား။ အရေးနှိမ့်သူများ ဖြစ်မလားဆိုတာ အဲဒီ မဲဆန္ဒရှင်လူထုက ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ လောလောဆယ်အားဖြင့် အခုပြီးခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့သမျှ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကာလတလျှောက်မှာ - တချို့ ကပြောကြပါတယ်။ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပွဲတွေဟာ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲ ကြာတယ်ဆိုတော့ ၁၅ မိနစ်လွှတ်တော်လို့တောင် အမည်တွင်နေတယ်ဆိုတော့။ အဲဒီလို အမည်သညှာ သမုတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်နေတဲ့ ဦးသိန်းညွှန့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုပြောချင်ပါသလဲ။ ဒါက တကယ်ပဲလား။ ဦးသိန်းညွန့်တို့အနေနဲ့ ဒီလို လွှတ်တော်အတွင်း ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အချိန်ယူပြီးတော့ ဆွေးနွေးခွင့်မရှိဘူးလား။ တကယ်ပဲ ၁၅ မိနစ် လွှတ်တော်ဖြစ်နေသလား။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ အဲဒီလို သုံးသပ်ပြောဆိုတာကတော့ သူ့ထင်မြင်ချက်နဲ့သူပေါ့။ ကျနော့်သဘောထား ပြောရရင်တော့ ဒါက သူတို့ စံနစ်တကျ လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်။ ကန့်ကွက်ချက်ပေးတယ်။ ကန့်ကွက်မယ့်လူမှ မရှိဘဲ။ ကန့်ကွက်မယ့်လူ မရှိတော့ ၁၅ မိနစ်ပဲ ကြာတာပေါ့။ သို့သော် သူတို့ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၊ နိုင်ငံတော် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ ရွေးတာကအစ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲတဲ့လူအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောရင်တော့ ၉၀-၉၅ ညီလာခံတက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ပြောရင်တော့ ကြာရင်လည်း ကြာတဲ့ အစည်းအဝေးတက်လာတဲ့လူဖြစ်တော့ တက်ရတာပေါ့။ မြန်ရင်လည်း အစည်းအဝေးပြီးရင်လည်း ပြန်ခဲ့တာပေါ့။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ နိုင်ငံတာဝန်။ ဟိုအရင်နဲ့ မတူတာက လူထုက ပေးလိုက်တာ။ အခု ကျနော် ဒီကို တက်လာတာက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် လူထုက ပေးလိုက်တဲ့ mandate လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့၊ ကျနော်လုပ်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့၊ ပေးထားတဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ရသမျှလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ တက်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ ကျနော်အဖို့ အစည်းအဝေး အချိန်တိုသွားတာတို့၊ အစည်းအဝေး အချိန်ကြာရှည်တာတို့ဆိုတာ ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် အပြင်ကလူတွေ ပြောတာနဲ့ မတူတာကတော့ သူတို့ စံနစ်တကျလုပ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ ဦးသိန်းညွှန့် ပြောတာကတော့ အစည်းအဝေးအချိန် တိုတောင်းတာ၊ ကြာမြင့်တာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ဒီနေရာမှာ အထူးသဖြင့် ဆွေးနွေးငြင်းခုံပိုင်ခွင့်၊ တင်ပြပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတာပေါ့။ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးကာလတလျှောက်မှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ တင်သွင်းတဲ့ ဒီအစိုးရကိစ္စတွေကို အတည်ပြုရေးကိစ္စ၊ ထောက်ခံရေးကိစ္စတွေနဲ့ပဲ ပြီးသွားသလား။ ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်း အစောက ဦးသိန်းညွှန့်ပြောသလို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်က ပြည်သူတွေက ပေးလိုက်တဲ့အခွင့်အဏာအရ ဥပဒေအကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခွင့် တင်ပြပိုင်ခွင့်တွေ ဘယ်လောက်အထိ ရခဲ့သလဲ။ အထူးသဖြင့် ဘယ်လိုအချက်မျိုးတွေမှာ တင်ပြပိုင်ခွင့်တွေ ရခဲ့သလဲ။ ဘယ်တော့ရမလဲ။
ဦးသိန်းညွန့် ။ ။ အဲဒါကတော့ ကျနော်ပြောချင်တဲ့အချက်က လွှတ်တော်ဆိုတာ အာဏာပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကို ခန့်အပ်ရုံနဲ့ ပြီးတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ လွှတ်တော်ဆိုတာ ဥပဒေကြမ်းတွေ ဆွေးနွေးရမယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့  အဆိုတွေကို လက်ခံဆွေးနွေးရမယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့  အမေးကို ဖြေရမယ်။ အခုတော့ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖွဲ့စည်းနေတယ်ဆိုတော့ တာဝန်ခံ ဖြေကြားမယ့်လူ မရှိသေးဘူး။ နောက်တခါ အဆိုနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ယနေ့အထိ ကတိသစ္စာပြု မလုပ်ရသေးဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ဝန်ကြီးတွေကလည်း ကတိသစ္စာပြုပြီးတော့ လွှဲပြောင်းယူတဲ့အဆင့် မရောက်သေးဘူး။ အဲဒီတော့ လွှတ်တော်အတွင်းမှာပဲ တာဝန်တွေ လွှဲပြောင်းယူပြီး၊ သမ္မတကလည်း သစ္စာပြုပြီးဆိုရင် ကျနော်တို့ ဥပဒေကြမ်းတို့၊ အဆိုတို့၊ မေးခွန်းထုတ်တာတွေ ပေါ်လာမှာပေါ့။
Top 25 Canadian Immigrants of 2011 မြန်မာရဖို့ Dr. Myint Win Bo ကိုမဲပေးစို့ ....
Myint Win Bo, P.Eng, P.Geo, IntPE (UK), B.Sc, DUC, M.Sc, Ph.D, FICE, FGS, MASCE, C.Eng, C.Geol, C.Sci, C.Env, Eur Geol, Eur Eng.
Senior Principal / Director (Geo-Services)
Lakehead University & University of ottawa, CANADA
Dr. Myint Win Bo isapractising engineer as well as educator and researcher in geotechnical engineering, engineering geology and hydrogeology. Dr. Bo has been practicing in the engineering, geology, science and environmental fields in four continents (Far East, Pacific, Europe and North America) around the world over the last 30 years. Dr. Bo was alsoageotechnical designer for many award winning projects around the world. His skills and scientific contributions in the field of civil/geotechnical engineering have been recognized via publications in international journals and conferences. He has published three textbooks, two book chapters, 50 referred international journal papers and 80 referred conference papers.
Dr. Bo holds many science and engineering degrees and professional titles from numerous professional societies. Dr. Bo is also contributing to the industry through national and international professional societies asacommittee member. He isareviewer for many international journals and has also been assisting in the conference advisory committee for countless international conferences. Dr. Bo has also been giving special and keynote lectures in Tertiary Institutions, Professional Societies and International Conferences. Dr. Bo has always been practicing in the industry while consistently in collaboration with academic institutions. He is supervising many doctoral students, as well as serving as adjunct professor for many universities.
မဲပေးရန်မှာ.. http://www.canadianimmigrant.ca/top25 ကိုသွားပြီးလျှင် Bကိုနှိပ်၍ Myint Win Bo ကိုရွေးချယ်ပြီး Step 2နှင့်3ကိုဖြည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။